China PVC-U Drainage Pipe Fittings fekitori uye vanotengesa | Zhili
SHRH UPVC Pipe Kubatsira
Yakakwira Kuyerera Kugona: Iyo inotsvedza yemukati madziro uye yakaderera kukwesana kwePVC-U drainage fittings inoguma yakaderera kuyerera kuramba uye yakakwira vhoriyamu.
Corrosion Resistance: PVC-U drainage fittings haasi-makondakita emagetsi uye immune kune electrochemical maitiro anokonzerwa neacids, mabheseni, uye munyu unokonzera ngura mune simbi.
Yakadzika Kuisirwa Mari: PVC-U drainage fittings are lightweight uye akaisirwa nesolvent simenti, uye gasketed mubatanidzwa. Kurerukirwa kwekugadza kunoderedza iyo yekuisa mitengo.
Hurefu Hwebasa Hupenyu: PVC-U drainage fittings inogona kushanda kweanopfuura makore makumi mashanu iri pasi pekushandiswa kwakakodzera.
Zvakatipoteredza-zvine hushamwari: PVC-U drainage fittings inogona kudzokororwa.
SHRN UPVC Pipe Zvinhu
1 Zvinyorwa: Hollow Silencing Pipe
2.Zvinhu: isina kuiswa polyvinyl chloride
3.Size: 16mm kusvika 630mm
4.Mavara: chena uye mamwe mavara anowanikwa pane chikumbiro
5.Connection: socket-spigot yakabatana nesolvent simenti
6.Standard: ISO 3633: 2002
7.Certification: ISO9001, ISO14001 uye OHSAS18001
8.Zvishandiso: drainage uye tsvina
1.Tine simba r & d kugona uye kugona kudzora kugona. Kambani yedu inyanzvi yePVP inoumbwa nezvimedu mutengesi ine nhoroondo yemakore anopfuura makumi maviri neshanu. Isu tine simba rakasimba r & d uye kugona kwehunhu kugona.
2.Iyo kambani ine yakasimba technical technical, yakasarudzika zvinhu kusarudzwa, michina yemhando yepamusoro uye yakapfuma yekugadzira ruzivo.
3. Tine zvakawanda zvigadzirwa.
4. Unogona kusarudza zvinotevera PVC makomponi:
Zvinoenderana neukukutu (kuomarara, semi-kuomarara, kupfava), Zvinoenderana nemabasa (kuputira, humbowo hwemafuta, humbowo hwechando, kupisa kwese kupisa, kupfeka kuramba, hwema hwakaderera, nezvimwewo).
5.Magadzirirwo akasarudzika anogona kupihwa.
Pashure: pvc magetsi pombi
Zvadaro: PVC-U Mvura Pipe
Yakasimba Wall Spiral Pipe